Rooble iyo Caleema Saarka Geellaha Jabuuti | KEYDMEDIA ONLINE
17 June 2021 Nabadoon Xaad oo qoray qaar kamid ah dhallinyarada loo qaaday Eritrea
Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda xil gaarsiinta Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa markii ugu horreysay ka qeyb galaya xaflad caleema saar mid kamida waddamada aan dariska nahay!
MUQDISHO, Soomaaliya - Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa ka faa'iideysanaya fursad uu siiyay madaxweyne Farmaajo taasoo ah ka qeyb galka xafladda caleema saar mid kamida waddamada dariska la ah Soomaaliya, Rooble ayaa buuxiyay kaalintii madaxweyne Farmaajo ee ku aaddaneed ka qeyb galka xafladdaasi.
Farmaajo ayaa toddobaadkan ka qeyb galay xaflad lamida tan oo ah Caleema Saarka madaxweynaha waddanka Uganda Yuweri Musafani, isagoo halkaasi kula kulmay madaxda qaar kamida waddamada ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya ee AMISOM, hayeeshee wuxuu ka cudr-daartay ka qeyb galka xafladda caleema-saarka madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele, madaxweynaha Jabuuti.
Rooble ayaa la tilmaamayaa in tani ay fursad u tahay siyaasaddiisa xilliga kala guurka iyo mustaqbalka Soomaaliya, waxa uu bixinayaa ka qeyb galkiisa in aysan jirin colaad u dhaxaysa labada waddan ee Soomaaliya iyo Jabuuti, waxayna shaaca ka qaadeysa xurguf u dhaxaysa madaxweyne Farmaajo oo u ciil qaba sidii uu xafiiska kusii joogi lahaa iyo dhiggiisa Ismaaciil Cumar Geelle oo diiday inuu kala shaqeeyo sidii Farmaajo uu afar sano oo kale xafiiska ufadhin lahaa.
RW Rooble iyo madaxweyne Farmaajo ayaa ku kala aragti duwan arrinta la isku hayo ee waddanka Jabuuti kala dhaxaysa Soomaaliya, taasoo la hubo in ay tahay dan shakhsi oo aysan ahayn dan umadda Soomaaliyeed ay leedahay. RW Rooble wafdigiisa waxaa ku wehliya qaar kamida wasiirrada xukuumaddiisa inkastoo ay yihiin shakhsiyaad ku xiran meeshana uu keensaday Farmaajo haddana ma sameyn karaan wax ka baxsan howsha qeyb galka iyadoo ay macquul tahay in ay tallaabo-tallaabo ula socodsiiyaan Farmaajo ficillada uu qaadayo Rooble.
Nabadoon Xaad oo qoray qaar kamid ah dhallinyarada loo qaaday Eritrea